Botsimanga ratsy - Manome toro-hevitra momba ny fomba hamahana azy io ny Semalt
Alexander Peresunko, Semalt Mpitantana Success Successor, dia nanambara fa ny fanovàna nomerika dia niova tanteraka ny fomba fitantanana ny orinasa ary koa ny fomba fiainantsika. Isaorana ny teknolojia smartphone sy ny solosaina finday ary ny fidirana aterineto manerantany mihoatra ny 3 lavitrisa amin'ny olona mampiasa ny aterineto mba hiresahana amin'ny namany ihany. Ankoatr'izany, ny fivarotana an-tserasera sy ny famandrihana ny sidina tapakila dia lasa ampahany manan-danja amin'ny fiainana maoderina.
Noforonina noho ny antony maro samihafa ny programa Internet maimaim-poana antsoina hoe bots. Tsara ny sasany amin'izy ireo raha ratsy kosa ny hafa - holland style bikes. Ireo tsara ireo dia ahitana ny bitsika sosialy sosialy, milina fikarohana bots, bota aggregator ary ny hafa. Ny boka maloto na ratsy dia noforonin'ireo hackers mba hangalarana ny mombamomba anao manokana sy hanatontosa asa maodina amin'ny fitaovana an-tserasera.
Mialà amin'ny fisoratana anarana
Ny sasany amin'ireo asany dia mamorona antontan-taratasy hosoka, manangona ny mombamomba azy manokana, manala ny votoatiny, ny vokatra ary ny vidiny, mamorona disadisa ho anao rehefa mandidy sy mivarotra tapakila an-tserasera, sy ny sisa. Ny hetsika tsy misy dikany dia tsy misy fiafarana ary tokony hajanona amin'ny fomba rehetra..Ohatra, raha manao raharaham-barotra an-tserasera ianao, dia mety hanimba ny tranokalanao raha manohintohina ny boka ratsy ianao. Ny hackers sy ny mpifaninana dia afaka atsahatra amin'ny fanakanana ny adiresy IP.
Fanadihadiana ny Logs
Ny log de server Apaches, NGINX, ary ISS dia azo dinihina amin'ny fomba samihafa mba hahitana ny asa ratsy sy ny bots amin'ny pejy Internet anao. Isaky ny mamoaka ny lahatahiry ao amin'ny takelaka dia tsy maintsy mamorona tsanganana ianao mba hamantarana ny adiresy IP sy ny mpampiasa. Rehefa fantatrao ny roa amin'izy ireo dia ho mora aminao ny hanakana azy ireo tsirairay. Azonao atao koa ny manavaka ireto IP ireto sy manakana azy ireo amin'ny navigateur web anao manokana Firewall. Asa goavana izany ary mety handany ora maromaro, fa ny vokatra dia tsy mampino ary mihoatra ny antenainao.
Asehoy ny CAPTCHA ho an'ny roambinifolo sy ny olombelona marina mba hiarovana ny tranokalanao amin'ny hackers. Io no iray amin'ny fomba mahazatra sy mahagaga mba hanakanana botsa sy robots ratsy amin'ny pejy rehetra misy anao. Tokony haseho amin'ny olona rehetra na botsika mitsidika ny tranokalanao ny CAPTCHA raha tsy nahazo alalana ianao.
Io no iray amin'ireo fahadisoana lehibe nataon'ireo webmasters isan-karazany dia ny fametrahana ny robots.txt amin'ny URL Dislow, izay mino fa ireo mpitsikilo sy bots, tsara na ratsy, dia tsy hivezivezy amin'ny tranonkala. Tsy mety ny milaza fa ity fotoana ity dia handany fotoana marobe, fa ny vokatra dia lehibe foana. Azonao atao ny manala ny bots amin'ny alalan'ny fanovana ny fanovana ao amin'ny rakitra an-tsoratrao. Raha fehezina, tokony hampiasa ny rakitra robots.txt ianao mba hampitsaharana ireo sora-baventy amin'ny fangalarana ny votoatin-tranonkalanao sy ny lahatsoratra.